Glass vera vita amin'ny vera vita amin'ny metaly ve ny fitaratra misy tariby?
Ny vera vita amin'ny vera vita amin'ny metaly dia karazana vera misy laminated izay misy tariby na harato tariby tsara ao anaty vera. Miorina amin'ny fahaizany mahazaka afo tsara, nanomboka nampiasaina tany Etazonia ny vera misy tariby, ary natao hanoherana ny onjan'ny hafanana sy ny fantsona. Io no mahatonga ilay vera tariby voalohany ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny endrik'ireo metaly mora miendrika sy ireo tarehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy
Mpanjifa maro no manontany momba ny tsy fitoviana misy eo amin'ny firafitry ny facade Metal Mesh & ny crimped Woven Wire Mesh facad cladding. Raha ny marina, ny karazany roa amin'ny harato metaly dia mitovy amin'ny ankapobeny amin'ny asa. Ampiasaina amin'ny rindrina ivelany na rindrina anatiny ...
Ny tombony amin'ny valin-drihana vy
Ny harato metaly mihantona, antsoina koa hoe harato metaly haingon-trano (harato tariby tenona) dia vita amin'ny vy vy na tariby metaly, miaraka amina lamina lamba samy hafa eo amboniny, ny valindrihana metaly vita amin'ny valin-drihana dia samy manana ny vokany sy haingon-trano. Miorina amin'ny fomba fanenomana samy hafa, ny fomban'ny metaly met ...